कर्मचारी अभावले स्थानीय तहको काम प्रभावित - राष्ट्रिय - Radio Kantipur
कर्मचारी अभावले स्थानीय तहको काम प्रभावित
- अमृता अनमोल, बुटवल
जेष्ठ ११, २०७६
स्थानीय तहको काम र कार्यक्षेत्र थपिंदै गएको छ । तर कार्यक्षेत्र अनुसारका कर्मचारी छैनन् । रुपन्देहीमा १६ स्थानीय तह मध्ये अधिकांशमा दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी नहुँदा कामकाज प्रभावित हुँदै आएको हो । रोहिणी गाउँपालिकामा ३३ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ । तर, दरबन्दीमा भएका ७ जना कर्मचारी मात्रै कार्यालयमा छन् । २६ जना कर्मचारी अझैं आएका छैनन् ।
गाउँपालिका अध्यक्ष सनोज कुमार यादवले कर्मचारी नहुँदा लक्ष्य अनुसार काम हुन नसकेको बताउनुभयो । २९ जनाको दरबन्दी रहेको सम्मरीमाई गाउँपालिकामा १० जना मात्रै स्थायी कर्मचारी छन् । कर्मचारी नहुँदा दैनिक प्रशाशन सम्हाल्न समेत समस्या छ ।
लक्ष्य अनुसार बजेट खर्च भएको छैन । गाउँपालिका अध्यक्ष जितेन्द्रनाथ शुक्लले आर्थिक मामिला र दैनिक प्रशाशन सम्हाल्ने काम गर्ने कर्मचारी नभएपछि जनप्रतिनिधिले मात्रै काम गरेर नहुँने बताउनुभयो ।
कर्मचारी नहुँदा स्थानीयले छिटो र सरल सेवा पाएका छैनन् । कोटहीमाई गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशाशकीय अधिकृत गणेश घिमिरेले थोरै कर्मचारीले धेरै सेवा दिँदा सेवामा गुणस्तर पनि हुन नसकेको बताउनुभयो ।
संघीय सरकारले दरबन्दी तोकेको ठाउँमा कर्मचारीलाई जान पटक पटक निर्देशन दिंदै आएको छ । तर, पहुँचको आधारमा कर्मचारी विकट मानिएका स्थानीय तहमा गएका छैनन् । कतिपय कर्मचारी स्थानीय तहमा नआउँदै सरुवा गरिएका छन् । यसले स्थानीय तहमा थप समस्या भएको छ ।
ओमसतिया गाउँपालिका अध्यक्ष हिरा केवटले कर्मचारी आफैलाई स्थान रोज्न दिने र त्यसअनुसार खटाउँदा पनि स्थानीय तह कर्मचारी अभावमा रहेको बताउनुभयो ।
प्रकाशित:जेष्ठ ११, २०७६
राप्रपाको विस्तारित बैठक ६ र ७ गते असार ३, २०७६ पूरा पढ्नुहोस्
लाइसेन्सको विज्ञापन खुल्यो असार ३, २०७६ पूरा पढ्नुहोस्
जुम्लामा रहेको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने १६ जना विरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दाअसार २, २०७६ पूरा पढ्नुहोस्
इनरुवामा एक जनामा डेंगु फेला पर्‍योअसार २, २०७६ पूरा पढ्नुहोस्
श्रमिकको आन्दोलनका कारण हायात होटेल बन्दअसार २, २०७६ पूरा पढ्नुहोस्
नेपाली स्याट वानले पृथ्वीको परिक्रम सुरु गर्‍योअसार २, २०७६ पूरा पढ्नुहोस्
गृह मन्त्रालय मातहतका संरचना एकात्मक प्रणालीमा रहनु दुखद असार २, २०७६ पूरा पढ्नुहोस्
बझाङमा जिप दुर्घटना हुँदा ९ को मृत्यु, ६ घाइते (अपडेट)असार २, २०७६ पूरा पढ्नुहोस्
असुरक्षित बन्दै बेनी–जोमसोम सडकअसार २, २०७६ पूरा पढ्नुहोस्
बझाङमा जिप दुर्घटना हुँदा ६ को मृत्युअसार २, २०७६ पूरा पढ्नुहोस्
११ महिनामा ६ सय ६६ जनाको मृत्यु ११:१७राप्रपाको विस्तारित बैठक ६ र ७ गते ११:००गुठी विद्येयकको विरोधमा काठमाडौंमा आन्दोलन चर्किएपछि पछि हट्न सरकारलाई दवाव १०:५९लाइसेन्सको विज्ञापन खुल्यो १०:५०मुलुक बनाउन अन्तर पार्टी सम्बन्ध बलियो हुनुपर्छ : डा. शेखर कोईराला १०:१८ महिला विश्वकप फुटबलमा फ्रान्स, जर्मनी र नर्वे विजयी ०८:२४वेष्टईण्डिजविरुद्ध बंगलादेशको शानदार जित ०८:१६अदालतमा बयान लगत्तै बेहोस इजिण्टका पूर्व राष्ट्रपति मोर्सीको निधन ०८:१०नवयुगको प्रेरणामा मोरङ सेमिफाइनलमा असार २, २०७६, २०:२१जुम्लामा रहेको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने १६ जना विरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा असार २, २०७६, २०:१२भारतमा सिन्ड्रोमका कारण मृत्यु हुनेको संख्या सय नाघ्यो असार २, २०७६, १८:४२इनरुवामा एक जनामा डेंगु फेला पर्‍यो असार २, २०७६, १८:३९श्रमिकको आन्दोलनका कारण हायात होटेल बन्द असार २, २०७६, १८:३६नेपाली स्याट वानले पृथ्वीको परिक्रम सुरु गर्‍यो असार २, २०७६, १८:३०गृह मन्त्रालय मातहतका संरचना एकात्मक प्रणालीमा रहनु दुखद असार २, २०७६, १८:२६
११ महिनामा ६ सय ६६ जनाको मृत्यु ११:१७राप्रपाको विस्तारित बैठक ६ र ७ गते ११:००गुठी विद्येयकको विरोधमा काठमाडौंमा आन्दोलन चर्किएपछि पछि हट्न सरकारलाई दवाव १०:५९लाइसेन्सको विज्ञापन खुल्यो १०:५०मुलुक बनाउन अन्तर पार्टी सम्बन्ध बलियो हुनुपर्छ : डा. शेखर कोईराला १०:१८अदालतमा बयान लगत्तै बेहोस इजिण्टका पूर्व राष्ट्रपति मोर्सीको निधन ०८:१०जुम्लामा रहेको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने १६ जना विरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा असार २, २०७६, २०:१२भारतमा सिन्ड्रोमका कारण मृत्यु हुनेको संख्या सय नाघ्यो असार २, २०७६, १८:४२नेपाली स्याट वानले पृथ्वीको परिक्रम सुरु गर्‍यो असार २, २०७६, १८:३०गृह मन्त्रालय मातहतका संरचना एकात्मक प्रणालीमा रहनु दुखद असार २, २०७६, १८:२६असुरक्षित बन्दै बेनी–जोमसोम सडक असार २, २०७६, १८:१२गर्मीका कारण चितवनका ६ स्थानीय तहमा स्कूल बिदा असार २, २०७६, १५:१२मन्त्री संसदले जन्माएको हो, आकाशबाट आएको हैन : लक्ष्मणलाल कर्ण असार २, २०७६, १३:३९